Ahoana ny fametrahana rindranasa Windows amin'ny Linux amin'ny alàlan'ny divay | Avy amin'ny Linux
Ahoana ny fametrahana rindranasa Windows amin'ny Linux amin'ny fampiasana divay
Noho ny antony maro samihafa, mety ho hitanao fa mila mihazakazaka programa Windows amin'ny Linux ianao. Mety tsy misy ny kinova ho an'ny Linux, fa ny kinova ho an'ny Windows dia tsara kokoa na matihanina kokoa ... na ny tianao fotsiny. Mety ho ianao koa no mila mampiasa an'io programa io satria io no "fenitra" an'ny indostria iasanao na satria tsy misy programa Linux manohana ny karazan-drakitra na antontan-taratasy noforonina miaraka amin'ny programa Windows anao amin'ny solosaina hafa.
2 Mametraka divay
3 Mihazakazaha ary apetraho ny programa Windows
4 Tsy avelako hihazakazaka ny programa / installer-ko! Mofom-pofona…
5 Manana olana hafa aho amin'ny fampandehanana ny programa
6 Esory ireo programa amin'ny divay
7 Amboary ny divay
8 Matahotra viriosy aho
10 Varavarana divay
11 Ohatra iray: uTorrent mampiasa divay
Alohan'ny hanombohana ireo torolàlana dia toa ilaina ny manao fandinihana fohy: raha vantany vao mametraka Linux ianao dia misy fomba maro ahafahana mihazakazaka fampiharana Windows, misy aza ny mety hametrahana Windows amin'ny milina virtoaly, izay azonao atao ny mihazakazaka mivantana avy amin'ny Linux.
Na izany aza, ny divay dia TSY emulator, araka ny anarany (Wine Is Not a Emulator, noho izany ny fanafohezana azy). Midika izany fa ny rindranasa Windows izay tanterahinao miaraka amin'i WINE dia mety, raha ny marina dia misy tranga marobe voarakitra, mihazakazaka maivana kokoa amin'ny Linux noho ny Windows.
Etsy ankilany, na dia amin'ny tranga sasany dia mety ho mora ny mamorona ny milina virtoaly falifaly ary mametraka ny kopian'ny Windows ao aminy ary avy eo ny programa, dia mety ho olana ihany koa izany. Voalohany indrindra, noho ny habetsaky ny loharanom-pahalalana (habaka kapila, fahatsiarovana ary fanodinana) izay holanin'ity fizotrany ity. Faharoa, Windows dia tsy rindrambaiko maimaimpoana, ary raha hametraka azy io dia heverina fa manana kinova tena izy ianao. Raha tsy izany dia tsy ho afa-mandositra ny olana momba ny patanty amin'ny Windows ianao.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny divay dia mamporisika anao aho hamaky azy io tahirin-kevitra, ny Wiki, ny Fomba ahoana ho an'ny vao manomboka ary ny antontan-taratasy «Famoahana angano mahazatra mifandraika amin'ny divay".
sudo apt-get wine toaka
Ao amin'ny Fedora:
ianao -mametraka divay
Ao amin'ny fizarana fampidinana dia azonao atao ny mahita ireo fonosana divay farany ho an'ny fizarana Linux malaza hafa toa ny Mandriva, Slackware, Debian, OpenSUSE, sns.
Mihazakazaha ary apetraho ny programa Windows
Raha vantany vao tafapetraka, ny divay dia hihodina amin'ny tsindry indroa amin'ny rakitra .EXE. Ho fanampin'izany, hamela anao hametraka programa ianao, toy ny hoe teo amin'ny Windows ianao ary hametraka ny hitsin-dàlana amin'ny menio lehibe eo ambanin'ny sokajy «Divay».
Na eo aza ny zavatra inoan'ny besinimaro, ny divay dia ampiasaina tsy handefasana rindranasa Windows tsotra fotsiny fa na lalao sarotra aza. Ankoatr'izay, voaporofo fa ny lalao mahatsiravina toy ny Sim 3, Half Life 2, Command & Conquer 3, Star Wars: Jedi Knight, na suite lehibe toy ny Microsoft Office dia miasa tanteraka.
Tsy avelako hihazakazaka ny programa / installer-ko! Mofom-pofona…
Araka ny heveriko fa fantatrareo, Linux dia rafitra iray tantanana amin'ny alàlan'ny tombontsoa omena ny mpampiasa. Izany dia mamela ny mpampiasa sasany hanao zavatra sasany. Toy izany koa ny fisie. Raha tsorina, tsy misy .EXE rakitra alaina avy amin'ny internet dia "azo tanterahina", mandra-pahafahan'ny mpampiasa manondro raha tsy izany.
Raha manandrana mihazakazaka ilay rakitra ianao dia mahita ity hafatra ity:
Avy eo ny sisa ataonao dia tsindrio tsara ny rakitra. Safidiko ny safidy Properties. Rehefa tonga eo dia mandehana any amin'ny tabilao fahazoan-dàlana ary alefaso ny avelao ny rakitra hisosa ho toy ny safidin'ny programa:
Manana olana hafa aho amin'ny fampandehanana ny programa
Raha toa ka tsy mandeha araka ny tokony ho izy na manana olana ny fampiharana apetraka dia ampirisihiko hiditra ny Daty fangatahana divay hahita ny fanehoan-kevitr'ireo mpampiasa hafa sy ny zavatra niainany nihazakazaka tamin'io programa io tamin'ny fampiasana ireo kinova divay samihafa. Ny programa napetraka sy voasedra tsirairay dia misy laharana. Raha tsy miseho ao anaty lisitra ilay programa tadiavinao, dia fotoana tsara mety hiara-miasa sy mampakatra ny fahatsapanao izany.
Esory ireo programa amin'ny divay
Tena mora izany. Mandehana any amin'ny Applications> Divay> Esory ny rindrambaiko divay.
Avy any ianao dia ho afaka hanaisotra mora ilay programa napetraka. Azonao atao ihany koa ny mametraka programa vaovao amin'ny alàlan'ity fitaovana ity, na dia mety ho mora kokoa amin'ny alàlan'ny fanindriana indroa fotsiny aza ny mpampiditra ao amin'ny mpikaroka rakitra na mivantana avy eo amin'ny varavarankely fampidinana ny mpikaroka Internet.
Aiza no apetraka ny zava-drehetra?
Amin'ny alàlan'ny default, ny programa rehetra dia hiezaka hametraka ny tenany ao amin'ny kapila C. Ny fanontaniana dia, inona ny kapila C-ko? Aiza daholo ireo rakitra mifandraika amin'ireo rindranasa Windows napetraka miaraka amin'ny divay tena voatahiry? Tsotra ny valiny: ~ /. Divay / drive_c. Izany hoe, ao an-tranonao dia misy fampirimana miafina antsoina hoe .wine izay itehirizana ny rakitra rehetra ao amin'ny kapila C. Raha ny hitanao dia folder fotsiny izay iantsoan'ny divay hoe "Disk C".
Aza adino fa afaka mametraka ny programa misy anao foana amin'ny toerana hafa ianao. Ilaina indrindra izany raha toa ka kely ny habakao amin'ny kapila na fizarazaran-toerana apetrakao amin'ny Linux na ny folder Home.
Amboary ny divay
Mora ny manangana divay. Mandehana any amin'ny Applications> Divay> Ampifanaraho ny divay.
Avy amin'ity varavarankely ity dia ho azonao atao ny milaza amin'i Wine izay kinovan'ny Windows alaina tahaka (Windows 7, Vista, XP, sns.). Ho fanampin'izay, ho azonao atao ny manondro ny rafi-peo tokony hampidiriny sy hiarahany miasa (ALSA, OSS, Jack, sns.), Izay mety tena ilaina tokoa rehefa miasa miaraka amin'ireo programa fanovana Audio matihanina. Azonao atao ihany koa ny manova avy eto ny làlana fitehirizana ny "C disk", ny fanatsarana ny sary ary ny fomba hanatanterahana ny fampidirana miaraka amin'ny birao.
Matahotra viriosy aho
Tsy rariny raha mahazo fahafinaretana daholo ny mpampiasa Windows, satria fantatry ny rehetra fa tsy misy ny virus Linux. Fotoana vitsy lasa izay, nisy karazana fanandramana hitazomana divay amin'ny Linux ny divay.
5 amin'ireo viriosy manimba indrindra voasedra (Klez, My Doom, Sobig, SCO Worm, Some Fool) ary ny valiny dia tsy dia mamporisika loatra, tsy nisy afaka niely ary iray ihany koa no mety hisy fiantraikany amin'ny rafitra fiasan'ny linux.
Raha fintinina, tsy ho very filaminana ianao amin'ny alàlan'ny fampiharana Windows amin'ny alàlan'ny divay, ny mifanohitra amin'izay dia ho azo antoka kokoa ianao noho ny nandefasanao an'io fampiharana io tamin'ny Windows.
Indraindray ny fametrahana rindranasa Windows amin'ny Linux amin'ny fampiasana divay dia mety ho asa sarotra, indrindra satria ny sasany amin'izy ireo dia mitaky tranomboky ivelany.
Winetrika dia script haingana sy mora hisintomana sy hametraka ireo tranomboky azo zaraina indray izay ilaina indraindray mba hiasa amin'ny fomba mahavariana ny zava-drehetra.
Ahoana ny fametrahana anao?
Ahoana no fomba hitantanako azy?
Raha vantany vao nahazo Winetricks ianao dia azonao ampiasaina amin'ny fanoratana ao amin'ny terminal:
Raha mihazakazaka azy tsy misy masontsivana ianao, ny efijery winetricks dia mampiseho GUI miaraka amin'ny lisitry ny fonosana misy. Raha fantatrao ny anaran'ny fonosana tianao hapetraka dia azonao atao ny manampy ny (anarana) amin'ny tsipika baikon'ny Winetricks ary manomboka avy hatrany ny fizotran'ny fametrahana. Ohatra,
Ity dia hametraka fonosana corefonts sy vcrun6.
Varavarana divay dia programa kely tena tsara izay mamela anao hametraka rindranasa Windows malaza be mora sy tsy misy olana. Mamonjy anao tsy hanana google ity hahitanao izay toerana hampiasana, sns.
Mba hametrahana azy dia mila mankany amin'ny fizarana fampidinana ao amin'ny tranonkala ofisialy ianao ary misafidy ny fonosana mety indrindra amin'ny fizarana Linux anao.
Ohatra iray: uTorrent mampiasa divay
Tsia ampiasaiko Transmission na ilay tsy mampino safo-drano. Raha tsy nanandrana azy ireo ianao dia mba ataovy izany. Saingy, mba hampisehoana fotsiny hoe ahoana ny fisehoan'ny Windows amin'ny Ubuntu mampiasa divay, ity misy pikantsary mampiasa uTorrent.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Ahoana ny fametrahana rindranasa Windows amin'ny Linux amin'ny fampiasana divay
100 hevitra, avelao ny anao
JA dia hoy izy:
Aiza no misy ny rohy hampidinana
Valiny amin'i JA
Agni dia hoy izy:
Tsy misy rohy fampidinana! Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny terminal anao no hanaovanao ny zavatra rehetra.
Valiny tamin'i Agni
linuxer novatin dia hoy izy:
Salama, azoko apetraka amin'ny divay ny webcam sy ny mpamily azy? dia io fakan-tsary io ihany no mifanaraka amin'ny windows XP, Me, 2000, ary 98 ny maodelin'ilay fakantsary dia videocam mahia usb2. Efa nanandrana nampifandray azy tao amin'ny Ubuntu 14.04 aho ary tsy afaka nampandrehitra jiro mena ilay hany hitan'ny Ubuntu dia ny fakantsary ampidiriko ao am-pofoako fa tiako ny mampifandray ilay fakantsariko genius ivelany azoko atao amin'ny divay.
Mamaly amin'ny linuxer novatin
Salama! Jereo, amin'ny zavatra niainako, ny olana dia tsy ny webcam-nao, fa ny divay dia tsy mitondra fanohanana ireo fitaovana USB ... misy fomba sasany hanohanana ireo fitaovana sasany saingy tsy mora izany.
Tsy afaka mampiasa ny webcam mivantana amin'ny Linux (raha tsy mihazakazaka divay amin'ny rindrambaiko windows)? Raha ny fahitako azy dia ny lafiny hafa no vahaolana ...
tincho dia hoy izy:
ny zavatra azo antoka indrindra dia ny fiasan'ny Web-Cam-nao plug & play ao amin'ny Ubuntu, ka tsy mila CD fametrahana ianao. andramo fotsiny ny mihazakazaka azy amin'ny farany Ubuntu Version 16.04 na 17.04 (izay manana kernel somary nohavaozina).
Raha toa ka tsy mifanaraka amin'ireo kinova misy ankehitriny ireo dia mamporisika ny hametra-pialana aho ... satria efa antitra tokoa ilay fitaovana (raha tsy nahazo fanohanana tao amin'ny linux izy mandraka ankehitriny, heveriko fa tsy hahomby velively).
Etsy ankilany, araka ny efa noresahinao, very ny fanohanany koa ny webcam amin'ny kinova Windows ankehitriny, ka mety fotoana izao hividianana Webcam vaovao.
Noho izany, ho an'ny fividianana Webcam manaraka, dia tadidio ny fahazoana Webcam miaraka amin'ny fanohanana Linux ... izay hanomezanao antoka fa hanome toky anao ny fitaovanao mandritra ny am-polony taona maro.
Mamaly an'i tincho
GONSALO dia hoy izy:
HELLO NAMANA ISAIZA NY MPANARAKA AN'ity SITE ity
Valiny amin'i GONSALO
Rdrigo dia hoy izy:
Salama, manontany anao aho. Manana mandriva 2011 aho ary napetraka ny divay 1.3.2.4. Tsy afaka mihazakazaka fampiharana aho. ary tsy misokatra ny divay. Mety tsy napetraka tsara ilay fonosana? Inona no amporisihanao ahy hiezahako?
Mamaly an'i Rdrigo
Santiago A Morón dia hoy izy:
Salama, apetraho ny divay, te hanana prog antsoina hoe esword aho ary mahazo ity lesoka manaraka ity: "error-run error" 429 ": tsy afaka mamorona objet ny singa activex. Misy olona afaka milaza amiko ve ny fanamboarana azy. Misaotra anao
Valiny tamin'i Santiago A Morón
Salama aho manana olana amin'ny ubuntu amin'ity hadisoana ity ... Fahadisoana: 429 - Ny singa ActiveX dia tsy afaka mamorona zavatra afaka manampy ahy azafady. Tsy fantatro izay nitranga, ka vaovao amin'ity.
Mamaly amin'ny CD
Ruben Ramirez dia hoy izy:
na studio sary, fantatro fa toa mampihomehy izany, saingy azo atao ve izany?
Valiny tamin'i Ruben Ramirez
na studio an-tsary fantatro fa toa mampihomehy, fa azo atao izany.
Azonao atao ny maka tahaka ny programa toa ny sonar 8.
newbie linuxera dia hoy izy:
Tena vaovao amin'ny linox aho, nanana ny Fedora 17 ary nametraka divay hahafahako manokatra mpikaroka Internet satria ilaiko ny manokatra pejy iray manokana, saingy tsy mazava amiko ny fomba fampiasana azy, azonao atao ny manazava zavatra toy ny "ahoana hanokatra mpikaroka Internet amin'ny divay ho an'ny dummy "hahaha hamonjy ny aiko izy ireo noho ny fisaorana
Valio ny linuxera novata
azonao atao ny misintona mozilla ary mihazakazaka mivantana amin'ny linux
Cesar Bonomi dia hoy izy:
Misaotra betsaka, mazava be ny fanazavanao
Valiny tamin'i Cesar Bonomi
Tiako ny mpitari-dalana anao, misaotra betsaka anao nizara ny zavatra niainanao 😀
misaotra anao, nanampy ahy tamin'ny fametrahana Winetricks io ampahany io, tsy hita tao amin'ny programa divay.
Ignacio-monreal dia hoy izy:
Rehefa mikapoka ny takelaka fahazoan-dàlana aho dia milaza amiko fa rafitra vakiana fotsiny (CDROM) ary tsy afaka mametraka azy aho. Ny ataoko?
Valiny ho an'i Ignacio-monreal
Salama Alejandro! Azoko atao ny milaza aminao ny hanandrana ny vahaolana omeko ao amin'ilay faritra «Tsy hamela ahy hitantana ny programa / installer-ko! Mofoka, manofoka ... »amin'ity lahatsoratra ity.
Mazava ho azy fa azo atao izany. Ankoatr'izay, ny zavatra niainako dia milaza amiko fa miasa kokoa noho ny programa tsy azo entina izy ireo.
Salama, azonao atao ve ny milaza amiko raha misy programa azo entina amina divay .. Misaotra betsaka
mauro365 dia hoy izy:
Fanontaniana iray, manana xubuntu aho ary tsy avelako hitantana azy io, saingy tsy hitako ny safidy hamelana ny fisie hihazakazaka ho programa, ny rakitra dia autorun.exe
Mamaly an'i mauro365
Alusok dia hoy izy:
Salama Pablo, misaotra indray.
Eny, raha nataoko io lazainao io ary koa ny alalana hatramin'ny omen'ny boaty fifanakalozan-dresaka. Lazao anao ihany koa fa misokatra ho ahy ny divay ary eo amin'ny takelaka »C» no ezahako hosokafana ilay rakitra (napetrako ny openuse amin'ny kapila mangirana ivelany sy Win-XP, amin'ny kapila mafy netbook), nefa milaza amiko fa tsy misy programa windows napetraka hanokatra ny rakitra (nahavita nanokatra azy ilay mpikaroka Internet, izany hoe). Ny olana ananako dia mila mametraka ireo mpamily sy mpanara-maso ny netbook aho, ohatra, ny wif dia tsy mandeha ho ahy amin'ny suse (na dia ny safidin'ny CD netbook aza dia mamantatra ho azy ny rafitra miasa napetraka, ao anatin'izany ny linux , saingy tsy mandeha ity CD ity dia tsy azoko akory ny manokatra azy.) Tsy misy zavatra hafa amin'izao fotoana izao.
Mamaly an'i Alusok
Notsapainao tamin'ny tsindrio havanana ny fisie sy ny fisafidianana ny safidy hisokatra amin'ny… Divay.
Ny 12/12/2011 13:59, «Disqus» <>
Lycan dia hoy izy:
Misaotra betsaka fa nanampy ahy be dia be izany, farany afaka nampiasa divay tamin'ny programa sasany izay nanome olana ahy aho
Valiny tamin'i Lycan
Tsara izany! Faly be aho fa nanompo azy!
Misaotra x commentaire!
Ahh! Fantatro izao izay mahadiso anao ...
Toy izao ny lohahevitra:
Miaraka amin'ny divay dia afaka mihazakazaka fampiharana windows tsotra ianao nefa tsy misy olana. Ankehitriny, raha ny fandefasana fampiharana sarotra kokoa, dia somary sarotra kokoa ny raharaha ary voajanahary fa izany no izy. Raha mihazakazaka Word, dia tsy ampy ny mihazakazaka ny Word .exe izay anananao amin'ny fizarazaran'i Windows (amin'ny ankapobeny satria ny Word dia mihazakazaka zavatra maro hafa amin'ny fotoana iray ary mitahiry ireo fanovana ao amin'ny Windows Registry, sns.). Inona no hatao? Eny, tsy maintsy mametraka Word amin'ny fampiasana divay ianao ary avy eo, eny, mihazakazaha Word.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny divay dia tsy hanampy anao amin'ny fampandehanana ireo rindranasa efa napetrakao tamin'ny fizarazaran'i Windows (raha tsy hoe tena tsotra na antsoina hoe "portable" izy ireo). Ny zavatra tsy maintsy ataonao dia ny mametraka ny application (eo. Ny installer .EXE dia hiasa tsara amin'ny WINE) ary hametraka ny programa ho toy ny fampiharana Windows ... io ihany no hapetrany ao amin'ny folder / / home / your_user /. divay.
Mazava ve ny fahasamihafana? Manantena aho fa ho "didactic" araka izay tratra.
yohangamboa dia hoy izy:
Misaotra Nanompo ahy betsaka dia misaotra
Ireto misy tranomboky sasantsasany izay mitondra ny fe-potoana winetricks art2kmin MS Access 2000. Fahazoan-dàlana ilaina!
colorprofile Momba ny loko Standard RGB
comctl32 MS fanaraha-maso mahazatra 5.80
comctl32.ocx MS comctl32.ocx sy mscomctl.ocx, valizy comctl32 ho an'ny VB6
corefonts endritsoratra MS Arial, Courier, Times
dcom98 MS DCOM, manilika ny fampiharana divay
dirac0.8 ny sivana Dirac 0.8 efa lany andro
directx9 MS DirectX 9 azo zaraina indray
dotnet11 MS .NET 1.1 (mitaky fahazoan-dàlana Windows)
dotnet20 MS .NET 2.0 (mitaky fahazoan-dàlana Windows)
codecs horonan-tsary ffdshow
flash Adobe Flash Player ActiveX sy plugins firefox
manamboatra endritsoratra ratsy izay miteraka fianjerana amin'ny fampiharana sasany (oh: net).
gdiplus MS gdiplus.dll (avy amin'ny mpijery herinaratra)
gecko Ilay motera fandikana HTML (Mozilla)
fonosam-panafahana Red Hat Liberation (Sans, Serif, Mono)
mdac25 MS MDAC 2.5: mpamily Microsoft ODBC, sns.
mfc40 MS mfc40 (Kilasy Fondation Microsoft avy amin'ny Visual C ++ 4)
mfc42 MS mfc42 (jereo vcrun6 etsy ambany)
msls31 MS Line Services 3.1 (ilain'ny mpanan-karena manankarena?)
msxml3 MS XML kinova 3
msxml4 MS XML kinova 4
msxml6 MS XML kinova 6
nanan-karena20 MS nanan-karena20 ary nanan-karena32
nanan-karena30 MS nanankarena30
tahoma MS Tahoma font (tsy anisany corefonts)
vb3run fandefasana MS Visual Basic 3
vb4run fandefasana MS Visual Basic 4
vb5run fandefasana MS Visual Basic 5
vb6run fandefasana MS Visual Basic 6
tranomboky vcrun6 MS Visual C ++ 6 sp4 (mfc42, msvcp60, msvcrt)
tranomboky vcrun2003 MS Visual C ++ 2003 (mfc71, msvcp71, msvcr71)
tranomboky vcrun2005 MS Visual C ++ 2005 (mfc80, msvcp80, msvcr80)
tranomboky vcrun2005sp1 MS Visual C ++ 2005 sp1
tranomboky vcrun2008 MS Visual C ++ 2008 (mfc90, msvcp90, msvcr90)
vjrun20 tranomboky MS Visual J # 2.0 (mitaky dotnet20)
wmp9 MS Windows Media Player 9 (mitaky fahazoan-dàlana Windows)
wmp10 MS Windows Media Player 10 (mitaky fahazoan-dàlana Windows)
wsh56js MS Windows scripting 5.6, jscript ihany, tsy misy cscript
wsh56vb MS Windows scripting 5.6, vbscript ihany, tsy misy cscript
autohotkey Autohotkey (fiteny fanoratana gui loharano misokatra)
kde KDE ho an'ny installer Windows
vlc VLC mpilalao haino aman-jery
allfonts endritsoratra rehetra voatanisa (corefonts, tahoma, fanafahana)
allcodecs codec rehetra voatanisa (xvid, ffdshow, icodecs)
sandoka fisoratana anarana palsuie6 hitakiana ny IE6sp1 dia napetraka
Native_mdac Override odbc32 sy odbccp32
nt40 Mametraha kinova windows ho an'ny NT40
win98 Mametraha kinova Windows Windows 98
win2k Mametraha Windows Version ho an'ny Windows 2000
winxp Mametraha kinova Windows ho an'ny Windows XP
vista Mametraha kinova Windows ho an'ny Windows Vista
winver = Mametraha kinova windows ho default (winxp)
volnum Ovao ny drive_c mankany harddiskvolume0 (ilain'ny installer sasany)
Tadidio fa azonao atao ny mametraka azy ireo amin'ny anaran'ny fangatahana sh winetricks
Araka ny fantatrao tsara fa misy fitaovana ilaina amin'ny MS WOS antsoina hoe fitaovana daemon izay miakatra sary disk ary manahaka ny rafitra fiarovana, saingy tsy mandeha amin'ny divay izany - raha ny fahalalako azy - Fantatrao ve raha misy safidy hafa ho an'ny divay daemon ho an'ny divay izay MITSIPIKA NY SISTEMA NY filaminana?
Mmmm ... tsia tokoa. Misy programa izay manao zavatra mitovy amin'ny Daemon Tools, saingy tsy azoko antoka fa maka tahaka ny rafitra fiarovana izy ireo. Inona marina no tianao holazaina rehefa miresaka momba ny "rafitra fiarovana"?
Ho an'ireo safidy haka tahaka an'i Safedisk amin'ny endriny samihafa sy ny hafa
izay tonga ao amin'ny menio daemon, izay tsy hitako intsony ankehitriny satria efa 6 taona aho
amam-bolana tsy misy MS WOS na dia alaina tahaka aza.
Andao, raha misintona ISO piraty amin'ny lalao ianao, na dia apetakao aza
furius, acétone, amin'ny alàlan'ny baiko na izay hanome anao hadisoana
filaminana raha tsy hoe misy triatra tsara izay mandingana azy mivantana.
Heveriko fa tranonkala na fizarana natokana amin'ny fomba filalaovana sary ISO an'ny
lalao amin'ny divay, miaraka amin'ny fitandremana ny manomboka hatrany amin'ny «fanaovana a
ISO an'ny kopiao tany am-boalohany »na dia fantatsika rehetra fa lainga izany, mety hisy izany
fahombiazana be eo amin'ny Maqueros sy Linuxeros. Izany dia raha tsy manome rohy mankany ianao
riaka mivantana, izany, na ahoana na ahoana, raha sarotra aminao ny manao ny
Ny kopian'ny ISO an'ny anao tany am-boalohany dia hita ao amin'ny tranokala hafa an'ny
Mazava ho azy, tsy maintsy ilaina ny mahita gamer, mpilalao divay, miaraka amin'ny fahalalan'ny cracker
ho sarotra ihany.
Mora ny manenjika mivantana ny MS WOS sy ny lalao.
Tamin'ny 18/11/10 23:08 PM, Disqus nanoratra:
Gerardo_azonos dia hoy izy:
Ahoana ny ... izaho aloha dia te-handefa fiarahabana ho an'ny olona rehetra izay mampiroborobo ny fampiasana ny rafitra fikirakirana Linux, ary milaza aho fa mampiroborobo ireo bilaogy rehetra hita mba hamahana ny fisalasalana sy hanehoana ireo fitaovana mamela mampiasa Linux, indrindra ny Ubuntu, ary mamela ireo rafitra miasa hafa toa ny Windows sy Mac.
Ny fanontaniako dia izao manaraka izao: nametraka ny biraon'ny Microsoft niaraka tamin'ny fanampian'ny divay aho, na izany aza isaky ny manokatra rakitra aho hanovana azy amin'ny birao (ary ilaiko amin'ny birao izany satria ampiasain'ny ekipako) manontany ahy ny toetra 25 izy io tenimiafina, napetrako ary avy eo tsy afaka manokatra ny birao intsony aho satria tafahitsoka… fantatrao ve izay azoko atao? Nametraka birao feno aho fa ny olana mitovy ihany ...
Mankasitraka torohevitra vitsivitsy aho ... misaotra betsaka mialoha.
Mamaly an'i Gerardo_azonos
Tsara tokoa, nametraka zavatra roa tamin'ny divay aho ary miasa tsara izy ireo, saingy izao aho manandrana mametraka TOAD ho an'ny Oracle ary rehefa manomboka ny efijery fametrahana TOAD aho dia mahazo varavarankely izay milaza amiko fa tsy manana fidirana aho tombontsoa, ​​mila mihazakazaka ny programa amin'ny maha-mpitantana ahy aho, tsy azoko hoe maninona no mitranga amiko izany, nihazakazaka divay zavatra hafa aho ary tsy nitranga tamiko izany, ary tsy hitako hoe nitranga izany na amin'iza na amin'iza.
manindrona dia hoy izy:
Misaotra betsaka, hametraka ny dotnet40 aho hahitako raha mety amiko. Fampahalalana mahafinaritra, efa ela aho no nitady fanazavana tsy dia ara-teknika momba an'izany rehetra izany!
Valiny amin'ny fanindronana
Salama sakaizantsika Andao hampiasa Linux !!
Zava-baovao amin'ny fampiasana linux aho !! Mampiasa ny distro Ubuntu 10.04 aho izao ary tiako ilay izy… Novakiako ary notsapaiko ireo zavatra ananany ary nianatra haingana aho !! Nametraka divay aho fa nanana hadisoana kely rehefa nametraka programa windows (winamp) misy divay ary nanapa-kevitra ny hanala divay fa ny olana dia tsy haiko ny manao azy! Azonao atao ve ny manampy ahy amin'izany? ny tadiaviko dia ny manaisotra azy tanteraka nefa tsy mamela famantarana! Ny tiako holazaina dia esory amin'ny rafitra ilay izy hamafa ny lahatahiry noforoniny tamin'ny ora nametrahana azy ary hamafana izany avy amin'ny menio fampiharana !! ny zava-drehetra !!! Miarahaba anao aho fa hahazo fanampiana tsara sy mora !!
Deluxe dia hoy izy:
Tena tsara! Winchester, Wflix na izay antsoina hoe "operating" system izay, dia fako raha ampitahaina amin'ny fahaizan'ny UNIX !! fitoniana inona raha miresaka Fedora, devian, sns ... ireo dia rafitra fandidiana mahefa!
Valiny amin'ny Deluxe
Cabelopc dia hoy izy:
Avy any Venezoueal aho ary nametraka ny CANAIMA tao amin'ny solosainako mba tsy hampiasa WINDOWS fa manana programa izay tsy haiko ny fomba hanaovana azy amin'ny WINE raha afaka manome tanana ahy ianao dia tokony hitrosa .. . ilay programa dia azo jerena ao amin'ny http://www.jovenes-cristianos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=766:software-biblioteca-cristiana-adventista-2011&catid=37:tutoriales&Itemid=59 inona no azonao atao ho ahy MANKASITRAKA
Valiny amin'i Cabelopc
Tapaka ny rohy ...
Tamin'ny 10 Aogositra 2011 21:10, Disqus
Fedz14 dia hoy izy:
namana lahatsoratra tena tsara fotsiny dia misaotra betsaka
Valiny amin'ny Fedz14
Faly aho fa nahomby! Misaotra x hevitra.
Manantena izahay ny hahita anao matetika eto.
Angamba hanampy anao ity fampahalalana ity: https://blog.desdelinux.net/como-jugar-juegos-windows-en-linux/ Mihobia! Paul.
Fampahalalana tena tsara, Mampiasà divay sy milalao amin'ny Linux Miezaka ny hametraka ny Microsoft's net aho ary lasa adala, tsy avelan'ny version 4 aho ary manandrana mametraka ny version 2 ho azy, mahazatra ve izany?
Nadia lokitah dia hoy izy:
Salama, efa novakiako daholo ny zava-drehetra, efa hitako koa fa ... tsy mahazo na inona na inona amin'ny .EXE !!! ; (Ary te-hisintona azy io aho. Ny namako iray, manana ny programa WINDOWS (Ao amin'ny kopia) satria nahita pejy hafahafa tamin'ny internet izy. Tiako ianao hanampy ahy amin'izany satria zava-dehibe aminao izany. Graxx ho an'ny mamaky sy manampy (Manantena aho) xD
Valiny tamin'i Nadia Lokitah
juanzeva dia hoy izy:
Jereo, apetraho ny mpanonta epson fx-890 ho mpanonta 9-pin…. Te-hamboariko ny mpanonta ahy hanonta ny antsasaky ny pejy fa tsy hanadino ny pejy manontolo…. Manana endrika efa vita pirinty aho izay antsasaky ny pejy haben'ny 5.5 ″ x 11 ″ santimetatra. MISAOTRA
Mamaly an'i juanzeva
josa265 dia hoy izy:
divay inona io?
Mamaly an'i josa265
tena tsara! Pablo tsara. Tsara ny ahatongavan'ireo karazam-baovao ireo amin'ny olona tsy mahalala Linux ary heverin'izy ireo ho "cuckoo" izany. Tadidio fa nihevitra ny olona fa tapitra ny ranomasina dia nifarana izao tontolo izao ary ... Nahita Linux i Columbus, hehehe
Carlos125 dia hoy izy:
Maestrooo !! Misaotra Pablo, tsy afaka nanao ny divay aho, tsara.
Valiny tamin'i Carlos125
MAURO MAURO dia hoy izy:
Efa ananako io, tsara post makina
Valio amin'i MAURO MAURO
Ny rigg0 dia hoy izy:
Misaotra anao vetivety aho dia mitady ity rindranasa ity ho an'ny linux. Nomena netbook ahy tany am-pianarana izy ireo izay misy rafi-pandaminana 2 tafiditra: linux sy windows. Tsy dia nampiasa linux firy aho mandra-pijanonan'ny fikandrana ary tena tsara!
Mamaly an'i The rigg0
Inona no tsy azonao apetraka? Divay?
Sudo apt-mahazo mametraka divay fotsiny.
Fanontaniana iray manana linuxmint aho ary tsy azoko apetraka. Avelako ny mailaka anao hanampy ahy.
Tsia, tsy mila manana Win napetraka amin'ny fizarana hafa ianao.
Mikarakara ny zava-drehetra ny divay. 🙂
Mba hahalalako bebe kokoa ny fomba fiasan'ny divay, manoro hevitra anao aho hamaky ilay lahatsoratra mifandraika amin'ny Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Wine
Hahita lahatsoratra mahaliana maromaro ihany koa ianao eto: http://usemoslinux.blogspot.com/search?q=wine
Ramiro Rodriguez dia hoy izy:
Mba hahafahana mampiasa, mila mametraka windows ve aho amin'ny partition hafa? sa afaka manadino azy tanteraka aho?
Valiny tamin'i Ramiro Rodriguez
diegomarclay dia hoy izy:
Salama hariva, vaovao amin'ny Linux aho, azonao atao ve ny milaza amiko ny fomba hanahafako ny win 7? Hatramin'ny nanandramako nanamboatra izany, ny kinova nohavaozina indrindra izay miseho ho ahy dia Win xp.
Mamaly amin'ny diegomarclay
fianarana dia hoy izy:
Asa tena tsara, Pablo! Misaotra anao nahavita nihazakazaka ny fampiharana Afip tamin'ny Linux (Ubuntu 11.04) (Dingana iray hafa mankany amin'ny fahaleovan-tena.) Bravo!
Mamaly ny fianarana
Tsara! Mety tsara raha afaka manao screencast momba an'io ianao, sa tsy izany? Famihinana! Paul.
Salama, mitovy amiko ny mahazo ahy amin'ny mauro365, fa amin'ny openuse, ahoana no hataoko autorun.exe? Divay. Misaotra anao mialoha.
voaloboka heli dia hoy izy:
Ahoana na inona ny tranomboky ilaina hametrahana nero?, Nero 10 manokana
Mamaly an'i heli parra
Ny fandraisana anjara dia namana mahafinaritra
josekikun dia hoy izy:
Wow, raiki-pitia amin'ny linux aho, lol XD, ary tena matotra izany. Eto isika ary avelao hanomboka ny traikefa nahafinaritra. Salama Linux 🙂
Mamaly an'i josekikun
Arthur Schampke dia hoy izy:
Salama namana, holazaiko aminao.
Izaho dia tao amin'ny Linux nandritra ny 1 herinandro latsaka ary tapitra nihantona aho, (nanomboka tamin'ny win7 ka hatramin'ny linux mint aho). Efa namaky ny tutorial anao aho, tena tsara izany, saingy te hahafantatra bebe kokoa momba ity programa divay ity aho, mila mametraka ny biraon'ny microsoft aho, nanaraka ny dianao aho, fa eo antsasaky ny any aho, izany no nolazaiko, angamba Latsaky ny antsasaky ny halehako any.
Nandalo fikafika divay aho ary nahita ny birao 2007 ary nametraka azy (araka ny filazako) xd, saingy tsy hitako io, nandeha aho teto: fa nitady lahatahiry maro aho ary tsy nahita na inona na inona, manantena aho fa avy hatrany valiny ary mitarika ahy ianao satria, amin'ny olan'ny linux aho dia newbie, misaotra.
Valiny tamin'i Arturo Schampke
Androany, ny tolo-kevitro dia ny hanandramanao ny PlayOnLinux. Ahitana andiana script hametrahana lalao sy fampiharana Windows ... Mihevitra aho fa anisan'izy ireo ny Office ...
Fa aiza ny dico c
zahao ao amin'ny HOME anao ilay folder .wine
Miala tsiny aho namana fa any Canaima aho satria 10 taona ary mitady sy mikaroka fa tsy hitako
Misy fampirimana milaza fa very famatsiam-bola fa rehefa te hanokatra azy aho dia milaza fa tsy mahazo alalana aho
Jose R Lopez dia hoy izy:
Manana fanontaniana aho rehefa te-hametraka rindrambaiko fangatahana mangataka ahy rindranasa hafa antsoina hoe gui toy ny taloha mba hamahana izany olana izany
Valiny tamin'i Jose R Lopez
gui dia tsy rindranasa, midika hoe Interface an'ny mpampiasa sary (izany hoe interface interface).
Noho izany dia tsy hitako izay programa mety ho iray tsy hita.
Tsy ampy ny fampahalalana hanampy anao.
Charles dia hoy izy:
Salama namana, azonao atao ve ny milaza amiko ny fomba fampidinana sy fametrahana minecraft 1.7.2 ao amin'ny ubuntu azafady ilaiko ny fanampianao
Mamaly an'i charles
Lahatsoratra tena tsara, misaotra
ergotron dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara, nanampy ahy hanapa-kevitra amin'izay hapetraka, milina virtoaly na programa Linux, misaotra! Hotantaraiko anao ny fandehany!
Mamaly an'i ergotron
Tsisy fisaorana! Misaotra anao nandao ny hevitrao
Nilo Taco dia hoy izy:
misaotra tamin'ny fanazavana, nanampy betsaka ahy izany.
Valiny tamin'i Nilo Taco
Tena tsara! Misaotra tamin'ny fampahalalana!
derwin dia hoy izy:
sa manana divay aho
izany no mahatonga ahy manao an'io
Mamaly an'i derwin
Eduardo Kattan dia hoy izy:
hahahahaha aiza ny rohy LOL
Araho ny torolàlana !!!
Valiny tamin'i Eduardo Kattan
Salama ity no fanontaniako dia hoe rehefa apetrakao ity dia azoko ity: sudo apt-get install wine1.6
divay1.6: miankina amin'ny: wine1.6-i386 (= 1: 1.6.1-0ubuntu1 ~ ppa1 ~ precise1)
Miankina: binfmt-support (> = 1.1.2) fa tsy azo apetraka
Manoro hevitra: gnome-exe-thumbnailer fa tsy azo apetraka na
kde-runtime fa tsy azo apetraka
Manoro hevitra: fonts-droid fa tsy azo apetraka
Manoro hevitra: ttf-mscorefonts-installer fa tsy azo apetraka
Manoro hevitra: fonts-horai-umefont fa tsy azo apetraka
Manoro hevitra: fonts-unfonts-core fa tsy azo apetraka
Manoro hevitra: winbind fa tsy azo apetraka
Manoro hevitra: winetrika fa tsy hametraka
Misy ihany koa ny tetika divay: sudo apt-get install winetricks
winetricks: Miankina: cabextract fa tsy azo apetraka
Manoro hevitra: divay1.5 fa tsy hametraka na
divay1.4 fa tsy azo apetraka na
cxoffice5 fa tsy azo apetraka na
cxgames5 fa tsy azo apetraka
Manoro hevitra: tsy maditra fa tsy azo apetraka
benjamin @ benjamin-Lenovo-G570: ~ $ sudo apt-mahazo mametraka winetricks
Arovy ny tenanao ary apetraho tsara ny PlayOnLinux:
gabrielvalbasini dia hoy izy:
rehefa manana fifandraisana aho dia tsy afaka mampiasa azy io ary milaza amiko fa satria tsy manana fifandraisana aho
Mamaly an'i gabrielvalbasini
Claudio dia dia hoy izy:
Salama Novakiako fa nanontany izy ireo taloha ary tsy misy valiny. Azo atao ve ny mametraka studio visual amin'ny xubuntu amin'ny alàlan'ny divay?
Valiny tamin'i Claudio estay
Jose Lamb dia hoy izy:
Tsy afaka mametraka na inona na inona amin'ny linus aho, mila dj virtoaly aho manaraka ny dian'ny tutorial youtube ary tsy mila fanampiana aho
Valiny tamin'i Jose Cordero
Manue A. dia hoy izy:
Mila anao aho hanampy ahy hametraka ity programa manaraka ity amin'ny Linux sy miaraka amin'ny divay "Visual C ++ 6.0" satria miankina aminy aho handefasana ny iray amin'ireo lohahevitra ao amin'ny Oniversite.
Ny olana ananako dia rehefa manindry ny bokotra manaraka aho (Ilay voalohany miseho amin'ny fametrahana) dia mikatona ho azy ny fametrahana.
Avy eo dia tiako ianao hanampy anao faran'izay haingana.
Valiny tamin'i Manue A.
Carlos E. dia hoy izy:
Salama, mila fanampiana aho. Manana OS antsoina hoe Lightweight Portable Security (LPS) aho ary tsy afaka mametraka divay. Ampianaro aho azafady. Misaotra!
Valiny tamin'i Carlos E.
Amin'ny maha Intalo divay ahy; azafady mba miaraha amiko fa mila azy ireo aho azafady raha misy eto RSPN amiko azafady: Misaotra: *
Misaotra tompoko tahiry tena tsara
AGSferrer dia hoy izy:
Ahoana no hametrahako divay amin'ny linux an'ny governemanta, inona ny baiko apetraka ao anatin'io fe-potoana io?
Valiny amin'ny AGSferrer
Ohatra tsotra ihany koa: http://tupagina.comuf.com/
Anel dia hoy izy:
Ny torolàlana momba ny divay rehetra dia tena nilaina tokoa
Valiny tamin'i Anel
Alberto Gonzalez placeholder image dia hoy izy:
Miezaka ny mihazakazaka rafitra ERP vita amina amboahaolo misy maso miaraka amin'ny fidirana amin'ny data database server sql izahay ary manana olana, nisy nanao an'io ?????, inona no fanampiana azon'izy ireo omena anay
Valiny tamin'i Alberto Gonzalez
GENNDA dia hoy izy:
Miarahaba… fanontaniana: ahoana no fampifandraisako karazana rakitra miaraka amina programa ao amin'ny divay? Napetrako ny Tracker ModPlug Open izay toa azo ampiharina amiko, [fanao] ary ny karazana rakitra rehetra dia nampifandraisina, .XM, .IT, .S3M, eo ny hafa ... fa tsy ilay .MOD. Miaraka amin'ny fomba mahazatra, toy ny amin'ny programa Linux rehetra, tsy azonao atao, manokatra ny programa amin'ny WINE fotsiny ianao fa tsy ny rakitra ...
Valiny amin'i GENNDA
Te-ho sitrana aho ary hampiasa indray ny fandaharam-potoana Lotus Organizer 5.0 ao amin'ny Ubuntu.
Miaraka amin'ny divay dia tsy nosokafany ho ahy akory izany.
Fantatro fa tsy ny programa rehetra izay miasa miaraka amin'ny Windows no manao izany amin'ny Linux, ary vao mainka aza mieritreritra fa efa antitra ity fandaharam-potoana ity.
Misy hevitra hampandeha azy amin'ny Ubuntu 10.04?
Miezaka ny ho sitrana aho ary manohy mampiasa ny fandaharam-potoana Lotus Organizer 5.0 amin'ny Ubuntu 10.04 miaraka amin'i Wine.
Tsy manokatra ny rindranasa ho ahy ny programa. Fantatro fa ny sasany izay miasa amin'ny Windows dia tsy mifanaraka amin'ny Linux ary betsaka kokoa raha antitra izy ireo, toy ny tranga amin'ity fandaharam-potoana ity.
Misy hevitra azon'ny mpikarakara atao hampandehanana ahy miasa?
Ny kinova Ubuntu dia 16.04.
IgnaSaravia dia hoy izy:
Torolàlana tena tsara. Tena azo ampiharina. Aorian'ny fametrahana divay isaky ny mihazakazaka fampiharana vaovao ianao dia ampidino ireo tranomboky ilaina mba hampandehanana azy. Saingy tsy mandeha amin'ny rindranasa rehetra izany matetika.
Valio amin'i IgnaSaravia
mpitari-dalana tena tsara dia nahagaga ahy
Fako ny divay, manandrana mametaka rindrambaiko aho ary manokatra varavarankely irery izy avy eo mitaraina fa efa misy mpikirakira mihazakazaka ary manidy ny iray hafa izy, raha manandrana manidy ny iray amin'ireo varavarankely aho, mihidy ny divay ... Fako madio, tsara kokoa ny mitady fampiharana hafa amin'ny Linux ary hadinonao ireo olana ireo.
Goncalvez dia hoy izy:
Nanao ny zava-drehetra aho, fa amin'ny lubuntu dia tsy misy mandeha… .linux
Valio i Goncalvez
Miro Video Converter 2.0: fitaovana voalohany hamokarana horonantsary WebM
Ny fiovana amin'ny Nautilus manaraka